Ilaa iyo 405 mudane ayaa haa ugu codeysay, halka 11 kaliyah ay ka aamustay ama diidday. Waxana tallaabadan loo arkaa mid uu goluhu jawaab ugu dirayo Turkiga oo ku dhawaad hal qarni diidanaa in wixi ku dhacay dadki reer Armenia aysan aheyn xasuuq.
Inkasta oo ay madaxweynayaal hore oo Mareykan ah ay dikereetooyin ku aqoonsadeen in uu xasuuq ku dhacay dadka reer Armenia, hadana waxay noqotay marki ugu horreysay oo uu Koongareeska Mareykanka si aqlabiyad leh u aqoonsado. Lama oga inuu Golaha Senetka ku waafaqi doono iyo in kale.
Wasiirka Arrimaha Dibadda Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa markiiba cambaareeyay tallaabadan, ku tilmaamay go’aan ceyb ah oo aanan sinnaba ugu cuntamin shacabka iyo dowladda Turkiga.
Wuxuu intaasi ku daray in qaraarka Koongareeska uu yahay mid ay dowladda Turkiga uga aar-gudanayaan duullaanka ay Ankara ku qaadday waqooyiga Suuriya.